Madaxweynaha Puntland Wasiiro Noocee ah buu Dooran Doonaa? - Horseed Media
Madaxweynaha Puntland Wasiiro Noocee ah buu Dooran Doonaa? January 14, 2014 Share this:FacebookTwitterGoogleFakarka madaxweynayaashu waxey u kala duwan yihiin hadba sida ay KALSOONI ugu qabaan naftooda, aqoontooda iyo maamulkooda.
Waxaa kale oo ay ku kala duwan yihiin LEGACY-ga uu rabo inuu madaxweynaha lagu xasuusto, sida:
1) Ma wuxuu rabaa inuu noqdo madaxweyne ilaa inta uu ka dhimanayo ama laga nacayo oo meel kasta looga sheekeysanayo oo guri walba laga habaaro oo ILAAHOW na dhaafi hal-heys u noqoto shacabka;
2) Ma wuxuu rabaa inuu noqdo madaxweyne laga baqo oo BAQDIN wax ku xukuma oo markii baqdintu dadka ka dhammaato, haraga lagala baxo
3) Ma wuxuu rabaa inuu noqdo madaxweyne dadkiisa ku dhex jira oo dhibtooda la socda oo la jeclaado oo magaciisa guri walba looga duceeyo, ILAAHOW cimrigiisa iyo xukunkiisa noo dheera guri walba laga yiraahdo.
Madaxweynaha ayey ku xiran tahey sida uu u shaqeeyo; khaas ahaan sida uu u doorto wasiiradiisa; la taliyayaashiisa iyo gaar ahaan shaqaalaha madaxtooyada. Haddii
3-daas shaqaale hagaagaan, waxaan shaki ku jirin iney talo fiican siinayaan madaxweynaha oo aysan u sheegeyn waxa wanaaga ah oo kaliya ee ay la socodsiinayaan DHIBKA kasta oo dalka ka jirta.
Madaxweynuhu hadduu doorto wasiiro, la taliyayaal iyo shaqaalaha maaxtooyada oo ah nooca jecel iney iney madaxweynaha iyo shacabka kala xiraan, waxaan shaki ku jirin iney qeylo bilaaban doonto deg deg ah.
Cadowga ugu weyn ee madaxweyne kasta oo hore (ex-president) adduunka oo dhan waxaa weeye shaqaalahiisa inta duntoodu aysan fiicneyn. Inta uu madaxweyne yahey six ad-dhaaf ah ayey hoosta uga galayaan.
Maalintii uu xafiiska ka tago ayey cadowtinimadiisa la soo baxaan.
Haddaan taariikhda dhaw dib u eegno, waxaa jirey madax carab ah oo badan oo si fiican loo jeclaa, loona soo dhaweeyey markii hore.
Markeyse muddo joogeen dictators isku bedeley oo shacabkii ku kacey kadibna la ridey.
Mushkiladda ugu weyn waxaa weeye markii madaxweynaha xukunkiisu sii dheeraado, wuxuu ka fogaadaa shacabka, wuxuu ka fogaadaa runta; waxaa uu hostage u noqon dhawr qof oo ayagu waxey rabaan u sheega; kana qariya xaqiiqada.
Markii Dr. Faroole la doortey waxaa loo soo dhaweeyey sida Dr. Gas loo soo dhaweeyey oo kale.
Muddo gaaban waxaa cadaatey ineysan isla socon Faroole iyo shacabku. Hasa yeeshee la taliyayaasha Faroole waxey u sheegayeen inuu 100% shacabku raali ka yahey.
Waxaase hubaal ah in guri walba oo Puntland ah lagu farxey isbedelka yimid. Nasiib-daro waxaa Puntland ugu farax yaraa BAARLAMAANKA oo 32 ka mid ah u codeysey Faroole, sababo caan Somali oo dhan ka ah awgeed.
Sababahaas oo ka mid ah arrimaha la rabo iney wax ka qabtaan madaxweynaha iyo ra’iisul baarlamaanka cusub.
Ninkii qeyrkiis loo xiirayow soo qooyso adiguna: Talada ugu fiican oo Dr. Gas la siin karo waxaa weeyey inuu ka faa’ideysto khaladaadkii madaxweynayaashii ka horeeyey oo dhan. Haddii uu intaas kaliya saxo, waxaan qabaa 90% wuu ku guuleysan doonaa maamulka Puntland.
Waxaa kale oo muhiim ah in madaxweynuhu doorto wasiiro, la taliyayaal iyo shaqaalaha xafiiskiisa oo RUN sheeg ah oo DHIBTA runta ah oo dalka ka jirta u sheega oo aan kala baqin iney u sheegaan dhibaatooyinka jira ee aan wax walba usoo qurxin.
Shaqaale madaxweynaha iyo shacabka isku xira ee aan kala qarin. Shaqaale dantooda koowaad tahey iney Puntland horey u mariyaan ee aan mushaar iyo xoolo la dhaco usoo doonan Puntland.
Shaqaale fahamsan in mushaarkoodu ka imaanayo dadka masaakiinta ah, kuna dadaalaya iney u shaqeeyaan dadka mushaarka siiya. Tilmaanta koowaad ee ay yeelan doonto dawladda Dr. Gas waa wasiirada, la taliyayaasha iyo shaqaalaha xafiiskiisa. Waxaan Ilaahey uga rajeyneynaa kuwa noogu kheyrka badan inuu doorto.
Ahmed Ali Bihi
khadiijo ali hashi says	January 28, 2014 at 11:32	waxay ila tahay madax weynahan c/wali mohamed ali gaas in uu soo doorandoono wasiiro
lagu qanac san yahay waxna tari doona dalkooda iyo dadkooda maxaa yeelay ninkaan waa nin muwaadin ah oo kagu wada qanacsan yahay
Jaaliyadda Puntland ee Finland oo taageertey go’aankii Dowladda Puntland ee ku aadanaa Dowladda federaalkaDhanbaalada Dhoohanayaasha Puntland Waa Awrkii Heeryo Cunka Ahaa!Ururka Alqaacida iyo maahmaahda “Qaniinyo ayaa qaniinyo kaa fujisa”U DUCEEYA REER QASA! By Mohamed OdowaHooyo Aabe Meeh?
Gudoomiyaha Baarlamaanka Oo Kampala Kusoo Xiray Shir U Socday Baarlamaanka Iyo Hay’adaha TaageeraRW oo Booqday Xeryaha Qaxootiga ee Dhadhaab Kenya (Sawiro)DF oo sheegtay in ay diyaar u tahay wada hadal in ay la Gasho Puntland.Xasan Shiekh oo maanta la kulmay Sargaal katirsan kongareska mareykanka (Sawiro)